Ihe aga-eme bụ ngwa oyiri nke Astrid maka imepụta ndepụta ihe | Akụkọ akụrụngwa
Ihe aga-eme bụ Astrid mmepụta oyiri ngwa n'ihi na elu àgwà na-eme anatara
Astrid bụ otu n'ime ngwa kachasị mma anyị nwere na gam akporo afọ ole na ole gara aga maka ndepụta ịme ihe. Offọdụ n'ime njirimara ya, dị ka ihe ncheta ebe, nabatara nke ọma ma maka ha ọ jisiri ike bulie dị ka otu n'ime ngwa kachasị mma maka arụpụta ihe. Naanị ihe furu efu na Playlọ Ahịa Google ka ụzọ maka ndị ọzọ dịka nnukwu Todoist.
Ihe aga-eme bụ otu n’ime ngwa ngwa ndị na-emepe emepe abịarutela ogide oghere efu fọdụrụ site na Astrid, nke kachasị dị ka ngwa eji akwụ ụgwọ nke na-enye atụmatụ dị iche iche na-enweghị ịgafe igbe. Monetization nke Ihe aga-eme bụ n'ihi ụfọdụ nhazi nke na-enye gị ohere itinye icing na achicha ahụ, ọ bụ ezie na eziokwu bụ, ha adịghị mkpa iji nweta ọtụtụ n'ime ya.
Nke a na-eji ngwa na-adịbeghị anya na-emelite na-ada na ya ụfọdụ-akpali nnọọ mmasị ozi ọma dị ka ndị na-apụta isiokwu, na mekọrịta na Google Task, Google Nọgidenụ na kpọọ na ọtụtụ ndị ọzọ uru, dị ka na n'ụzọ kwesịrị ekwesị mma desktọọpụ wijetị nwere ụfọdụ mmezi.
Ihe ndi ozo gunyere nhọrọ igbanwe n'etiti ọnọdụ abalị ma ọ bụ ụbọchị, isiokwu ndị ọzọ (enwere ike ịzụta ha maka micropayments) yana ike ịdepụta ndepụta aha Google ga-eme na agba na ihe niile. Aha ndị a na-acha uhie uhie na-enye gị ohere ịkọwapụta na ịkekọrịta ihe ndekọ niile ahụ nke ọma, nke na-enye gị nnukwu isi na ihu ọma gị maka ịlụ ọgụ megide Todoist, otu kachasị mma na ụdị a.
Ngwaọrụ natara ụfọdụ mmelite dịka isiokwu na agba ndị ahụ, yana ikike gbanwee nghọta site na mmịfe; n'ụzọ dị otú a ị nwere ike hazie wijetị. Na nhọrọ ya nke mbụ o nwere ihe ncheta ọnọdụ, smarts aga-eme yana interface echekwara nke ọma nke na-egosi na ndị mmepe mara ihe ha na-eme. Anyị ga-ahụ ngwa weebụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi ya, ọ nwere ihe niile iji bụrụ ngwa ngwa njikere gị.
Tasks.org: Ntọala ịme ihe na ihe ncheta mepere emepe
Developer: Ihe aga-eme.org
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ihe aga-eme bụ Astrid mmepụta oyiri ngwa n'ihi na elu àgwà na-eme anatara
Xiaomi Mi Rịba 2 ga-enwe a curved ihuenyo